ကုန်သည်များစိတ်ခံစားချက်ကိုရှာဖွေသောကြောင့် ETH/USD သည်ကျဉ်းမြောင်းသောအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်: Sally Ho ၏နည်းပညာသုံးသပ်ချက် ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ETH BitcoinEthereumNews.com
ကုန်သည်များစိတ်ခံစားချက်ကိုရှာဖွေသောကြောင့် ETH/USD သည်ကျဉ်းမြောင်းသောအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်: Sally Ho ၏နည်းပညာသုံးသပ်ချက် ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ETH
Ethereum (ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အစောပိုင်း၌မဖြစ်စလောက်မြေကွက်ကိုရရှိခဲ့သည် အာရှ pair တစုံအဖြစ် session ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှ 3369.23 အဆင့်အထိ အဖြစ်ကုန်သွယ်ပြီးနောက် အနိမ့် ထိုအဖြစ် 3273.30 အဆင့်အထိ မနေ့က အာရှ နှင့်အတူ session ကို နေ့နိမ့် ရုံ အောက်တွင် အ ၃၈.၂% ပြန်လည်ရရှိသည် ၏ အကွာအဝေးတန်ဖိုးထား မှ 3111.14 သို့ 3338.98မရ။ အဲဒီ့ဘက်မှာတစ်တွဲရှိတယ် အတော်လေးတင်းကျပ်သောအကွာအဝေး ၎င်းသည်ကုန်သည်များစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အချက်ဖြစ်သည် လတ်ဆတ်တဲ့စျေးကွက်စိတ်ဓာတ် သိသိသာသာမယူဆမီ စျေးကွက်အန္တရာယ်. BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာနွား ရပ်တန့် တိုတောင်းသော of စမ်းသပ်ခြင်း မကြာသေးခင်က အတော်လေးမြင့်မား အဆိုပါန်းကျင် 3389 ဧရိယာ ကုန်သည်များသည်မကြာသေးမီကစောင့်ကြည့်သည် အနိမ့် of 3111.14 ကိုယ်စားပြုသည် စမ်းသပ် ၏ ၃၈.၂% ပြန်လည်ရရှိသည် ၏ အကွာအဝေးတန်ဖိုးထား မှ 3009 သို့ 3583.48.
မကြာသေးမီကအောက်ပါ ရောင်းမည် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ထောက်လှမ်းရေးအဆင့်ဆင့် နှင့်ဒေသများ၏ အလားအလာနည်းပညာဆိုင်ရာခုခံ ပါဝင် 3399, 3519, 3640, 3789နှင့် 3811မရ။ ကုန်သည်များဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြသည် အလားအလာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု အဆိုပါန်းကျင် 2711.73 ဧရိယာ ကုန်သည်တွေကဒါကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ် 50-bar MA (၄ နာရီ) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 100-bar MA (၄ နာရီ) နှင့် အထက် အ 200-bar ကို MA (4 နာရီ) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ 50-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 200-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) နှင့် အထက် အ 100-bar MA (တစ်နာရီလျှင်).
စျေးလှုပ်ရှားမှုအနီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် 200-bar ကို MA မှာ (4 နာရီ) 3362.91 နှင့် 50-bar ကို MA (အလုပ်ချိန်) မှာ 3306.05.
On ၄ နာရီ ဇယား, နင် is Bullishly SlowD အထက် စဉ်တွင် MACD is Bullishly MACDAverage အထက်.
အရင်းအမြစ်: https://www.cryptodaily.co.uk/2021/09/eth-usd-confined-to-narrow-range-as-traders-seek-sentiment-sally-ho-technical-analysis-15-september- ၂၀၂၁-eth-ethereum
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ကန့်သတ်, ETH, ETHUSD, တွင်, ကျဉ်းသည်, အကွာအဝေး, Sally, ရှာကြလော့, စိတ်သဘော, စက်တင်ဘာလ, စက်မှုလက်မှု, ကုန်သည်ကြီးများ
Theranos သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအလားအလာများကိုပြောသောအခါ Elizabeth Holmes ကသိန်းနှင့်ချီသောဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ၀ န်ထမ်းဟောင်းကပြောကြားခဲ့သည်။
Starbucks က NLRB ကို Buffalo အလုပ်သမားများအားလုံးသမဂ္ဂ၏ကြိုးပမ်းမှုကိုမဲပေးခွင့်ပြုရန်ပြောခဲ့သည်